အင်တာနက်စွဲသုံးမှု နှင့် တရုတ် အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ချက် – ပြင်းရှတဲ့ ၀ိုင်တစ်ခွက်ပေါ့
This entry was posted in စိတ်ထဲရှိသမျှ. Bookmark the permalink.
← ကြံကြီးစည်ရာ….. (ဒါပေမယ့် ဒါလည်း ပညာတဲ့)
စကာင်္ပူမှ အလီဘာဘာများ →
4 thoughts on “အင်တာနက်စွဲသုံးမှု နှင့် တရုတ် အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ချက်”
ရွှေအောင် | November 20, 2008 at 1:09 am
ကုမ်ရာသီသူ | November 20, 2008 at 5:25 am
ဝေးဟေးဟေး၊ သေဖော်ညှိခြင်း အောင်မြင်ပြီကွ။ ဂိုဏ်းချုပ်ကြီး ကြွချီလာပြီ။ အလေးပြုပါတယ် ကိုရွှေအောင်
ထနောင်း | November 20, 2008 at 6:42 am
ကုမ်ရာသီသူ | November 21, 2008 at 2:42 pm
ကြိုဆိုပါတယ်။ ကုန်းရှီ၊ ကုန်းရှီ။ နောက်လာမည့် ရူးဖော်ရူးဖက်များကိုပါ ဆက်လက် စောင့်မျှော်လျက်